Sida loo Beddelaan MP4 in MKV
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in MKV
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo MP4 in qaab MKV. Haddii ay sidaas tahay, halkan hagahan waa uun kugu habboon. Waxay bixisaa MP4 awood leh in Converter MKV inaad, wuxuuna muujiyaa sida loo beddelo qaab video file ka MP4 in MKV aan dib-u-Deji aad.
Qeybta 1: Best MP4 in MKV Converter
Qeybta 2: MP4 Free in MKV Converter
Qeybta 3: MP4 Online in MKV Converter
Qeybta 1: Best MP4 in MKV Converter for Windows / Mac (El Capitan ka mid ah)
• U beddelaan si ay u 150+ qaabab video, MKV iyo xitaa videos 3D & HD ka mid ahaa.
• Si toos ah oo aad u telefoonada gacanta, PSP, Madaxweyne Siilaanyo Oo sida qaabab wax soo saarka leh ee presets filaayo.
• Samee DVD xirfadle by video inay DVD la ololaya codsigan.
• Work la 30X ugu dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta iyo wax soo saarka video tayada ugu fiican.
Sida loo badalo MP4 in MKV
Just heli hoos ku tutorial ah oo ku saabsan sida ay u badalaan MP4 in MKV on Windows (Windows 10 ka mid ah). Haddii aad tahay user Mac ah, riix halkan si aad u barato sida loo badalo MP4 in MKV on Mac (Yosemite ka mid ah).
1. Import MP4 in MP4 si Converter MKV
Burcad barnaamijkan weyn, ka dibna riix on interface in ay doortaan file MP4 aad. Isla markiiba, ay lagu dari doonaa Murayaad diinta barnaamijkan ee.
2. Dooro MKV sida qaab wax soo saarka
Next, guji image qaab ku saabsan "Qaabka Output" guddiga. Tag ah "Qaabka" tab iyo doortaan "Video" category. Halkan, waxaad ka heli kartaa qaab video jeclaystay - MKV.
3. Video goobaha (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in aad beddesho video ama codec audio, waqtigan, waxaad riixi kartaa doorasho "Settings" hoose oo ka mid ah "Qaabka Output" guddiga. Markaas suuqa kala pop-up ka, waxaad ka dhacay kartaa "Video Encoder" ama "Audio Encoder" liiska hoos-hoos in ay doortaan video ama codec audio aad rabto.
4. U beddelaan MP4 in MKV
Si fudud u riix "Beddelaan" badhanka hoose. Markaas hawlaha qaab beddelidda ayaa la sameyn doonaa oo kaliya dhowr daqiiqo ka dib. Ka dib markii in, waxaad tagi kartaa folder wax soo saarka si aad u ogaato faylasha badaley .mkv.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MP4 in ay MKV Converter for Windows (Windows 10 ka mid ah)
Qeybta 2: More fursadaha: Free MP4 in MKV Converter
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in MKV Converter
Tani MP4 si xor ah u Converter MKV waa 100% free video Converter. Waxa kaliya ee aad aan u bedeli karaan MP4 in MKV, laakiin sidoo kale aad jar karo, dalagga, darto saamaynta in la shakhsiyeeyo aad video. Xitaa waxaad u isticmaali kartaa inaad kala soo baxdo videos.
1. Waxa aanu lahayn presets filaayo in aad telefoonada gacanta. Waxaad u baahan tahay si ay u dejiyaan koobin ee qalabka la qaadi karo si aad gacanta.
2. The tayada wax soo saarka video aan la barbar dhigi karaa Video Converter Ultimate.
Video Converter Ultimate Waxay leedahay faa'iidooyin gaar ah in ka badan MP4 xorta ah iyo in ay online converters MKV. Haddii aad xiisaynayso waxa ku jira, kaliya isku day ah oo hoos ku qoran.
Sida loo Beddelaan iyo Guba MKV in DVD on Mac / Win
Sidee ku cadaadisaa MKV Faylal ay la Quality sameecadda ah ee Mac / Win
Sida loo Beddelaan MP4 in iPad
10 Methods Free si loogu badalo QuickTime MOV in wmv / AVI / MP4 / FLV, iwm
Sida loo Beddelaan MP4 in FLV (Yosemite ka mid ah)